MaZirudo nekusvirana paHurungwe! Veduwe ndakasvira garo rinenge vise
Ndakanonga matombo angu erekeni kuitirawo self defence, ndokupinda mutruck yangu ndokunyarara. Kubva Beitbridge netrip varume hakusi nyore, ndikozve kwaifanira kubva imwe truck yerecovery. Ndakabva ndafunga kuigadzira vhiri dzaingovawo shungu dzezhizha yadairwa pagungwa neshiri iya inonzi jenjera, ndipo pakasvika uno musikana mutema zvinoyevedza aitaridza kuti moyo wake muchena,,,,,,,,aitaridza kuti anogara kune imwe nzvimbo isiri yandaiva nokuti panogezwa nemvura ine soda nepanogezwa nemvura yamumufuku panosiyana. Munongozivawo vanhukadzi vane moyo munyoro ndakaburuka ndichiratidza kusuwisa apa ndaida kubvunza kwandingawane mvura nekune mashops , akadaira zvake neimwe language yandaisanzwisisa ndicho chikorekore chacho here ndakangoti ah dai hake adaira nechirungu pane kundishainira nechiGreek ichochi asi kutaura kwake kwaindinakidza chose.
Akazokwanisawo kundivigira mvura after 5 hrs zvekuti nguva dzainge dzatova kuma6. Ndakamuti apinde mutruck akabvuma yaivawo yakanaka neniwo ndiri smart tarirai oh .
Ndakanga ndatoona kuti best tactic ndeyekumunyenga mwana uyu kuti ndiwane favour coz nzara yakanga yandishanyira zvekurevesa. Zvekupfimba izvi ndine chipo uye ndikakutarisa katatu unobva wangoona kuti uyu anoita uyu, ndakamutsvetera kuti anondibikira nekundipawo pekurara nepekugeza ini ndaizotenga zvese zvataizodya mumba akabvuma, ndakangonzwa oti, “Ruhwe ruhwe ndekupera mweya pasangi here nhai Max?” Ndikati, “Yaa.” ndakaita zvekufungira zvaaireva semunhu akati ngwarei ndakaziva kuti ruhwe ruhwe aireva truck ndiro raiva rapera mweya.
Akati, “Bhuti, pamuri panechisa paderema hamusi kunzva miri wenyu kusisimuka here? Pane zvipoko. Kabanga ndikubatsirei.” ndakangoti, “Let’s go.”
Ndakabatwa nekutya ndandakutofunga kuti mwana uyu atori chipoko chacho, asi semurume ndakashinga kuti andibatsire.
Ndikati, ‘Ndibatsire hako nepekurara nechikafu ndane nzara handizivi kune mashops.’
Ndakamubvunza kuti, ‘ mashops aripi?’ akati, “Mira ndikutondeke kutaundishipi utsvage chekuja.”
Akandiudza kuti kwaive kurefu uye kwaityisa. Ndakazongotaura kutaridza kuti ndakashinga uye tiende tese ndobva taenda kunotenga zvizhinji. Musikana akatenge andida ndisati ndamuvhevha kkkkk sekutaura kwavo, takazodzoka paruhwe ruhwe paye tisinanga kunyumba kwavo kwenzi kuManyenyedzi, ndainakirwa zvangu ndichifamba ndichinzwa nokudzidziswa mutauro uyu kutya kwese kwakwandibata kukatiza.
Tasvika pamba paye akandiudza kuti aigara arimubodzi vabereki vake vaigara SA, iye akanga anodzoka kubvapo akanga adzoka kuzodongorera pamba. Pese apa ndakange ndatodiwa zvangu kuenda kumashops nokudzoka nekutenga zvinonaka ikoko haumborambwi nhema. Akandipa imwe welcome yandisina kunzwisisa mwana iyeyu ainzi Nyozerai.
Ndakafara nechemumoyo asi hana yairova kuti nhasi mari dzebasa dzobiwa ndichadanirwa matsotsi zvangu. Ndakabva ndaratidzwa kwekunogeza nemvura yaidziirira zvayo iye ndokusara achibika ,ndipo pandakawana mukana wekuviga mari yangu pandakaiviga ipapo ndobva ndadzokera zvangu ndachena kahana hakana kumira kurova ,mumusoro handina kumboisa sipo, ndaitya kujumhwa neboys. Iye akabva ati akunogezawo haaaa apo ndopandakaita manyoka ekutya ndikati vava kundodaidzwa zvino vana tsotsi. Ndakangorova kashort prayer kangu kokukumbira kupukunyuswa kana tsekwende youya asi ndakashamisika kuona babe uya achidzoka akamonera zambia akabata panty mumaoko kutya kukabva kwapera kukauya nyemwerero kunge yemwana aona mai vaaswera asinavo.
Semurume ndakasimuka ndokumugashira nehug ini zvangu pachimutambo cherudo handidi kutangirwa, ndakatanga kumubata mukitchen imomo ndikaona kuti munhu ane hosha uyu nechechemumoyo, ndakangoti nhasi anotondipa honorary degree resviro chete mira uone kuMasvingo mabhebhi anonditi Honorable Max.
Ndakamuita chisakaitwa pamuviri wake ndikaona achiita kumerera achigwadama nekiss ipapo ndikati huya nembwa gudo riya raneta, ndendere ndendere mumba imomo tichitsika ndiro tomboseka zvedu. Takazopedza warm up ndokuenda tese kuplay ground kureva kusviriro mumba make imomo, maiva makanaka chose maingova nehembe dzechikadzi chete nemubhedha waisashoreka zvawo . Akati akakotama kudaro achigadzira bed kusaziva kuti taizobvanyangura ndobva ndamujumha neshure ndikananga nyatso chaidzo handina kuzombowana mukana akabva ati tendeuku zambia achiri kanda uko zvandakaona veduwe. Choya chaisava chikuru bhinzi ichionekera so ndobva ndamupushira pabed akangoti,”Kiya door,” faster faster kukiya ndichidzoka ndakanga ndisisina kupfeka kana 1 iye akazvambarara akabatanidza makumbo ndikasvikoavhura so ndikati,’ babe wait i want you to enjoy,’ akabvuma ini ndiri nechepabeche chaipo ndiye bhenengu makumbo kudai haaa paiva nedinji veduwe kunge howa hwemachinge nyama .
Ndakamayamwa ese zvese pese zvapo mwana wevanhu akanga ava kumakore zvake. Ndakazoiti nyaaaa ummmmm yaigozha mbutu iyoyo ndinovimba kana kuri kusvirwa akanga apedzisira kusvirwa nevafana kumombe. Ndakaipomba ndokuizhazhavira ndakatanga kunzwa zvandaisanzwisisa mukutaura umu kkkkkkk. Ndaiti ndikasvira ndombobvisa ndakuda kutunda ipapo ndipo paaiti, “Usaibvisa kani rega irimo unonaka muvhitori iwe!!!” aiti tambisa zvose mazamu nematinji nebhinzi zvosse nekuiswa neshure yedu yekunaka iyi mukodo.
Ndakazonzwa akuti, “Yowe yowe ndanakirihwa andisati ndambozviitiwa ndakutunda ita ndidebatirira nyovha ndikunzve!!!!”
Akandikuza achiti, “Mubiyangu usasvomhore siya iyenzerere imomo, muvhitori unenaka tambisa matako!!!” ndakazonzwa musudzi
kuti bwii bwii bwiikkkkkkk achiti, “Mubiyangu ndakupasiwa naMwari unenaka handisada kuti udzokere. Ihwise mupakana yorombera ndanzva kudzimba usatatauka,” mheno zvakanga zvotaurwa kkkkk zvikanzi “Ummm ummm mubiyangu mandidzimba ndanzva nekunakiriwa ndikurungire ipapo ndakunzva kupera mweya ndichovhe.
Ndavhura makumbo kurungira tetekera unzve machende arikurova pamatinji ndibate musombo. Handisada kukusiya ndetekubata mabiyangu ndingaruze.”
Ndakabva ndawedzera rave counts ndava kunakiriwa kkkk ndaiti kunakirwa nesasi raNyozerai ndonakirwa zvekare nebeche racho yaiva double impact chaiyo. Zvino mwana wevanhu zvaanochema kuchiri kuseni kudai amboti adiiko. Hurungwe uko vanoda ndingati vanogona chikapa chengwena kunyanya ndiri pamusoro kudaro taiita kupindirana tichindosangana pakati kunge makwai ari kutungana, iye zvino tumisodzi twaibuda mumeso uku rurimi ruchinhanzvira ndobva ndaruti mwaaa uku ndichipomba haaa kiss sandi chinhu chekujairira ndatunda apa tairova hedu nyorovita pasina butiro. Panonaka mboro haimborari takaita setichaedzerwa tichisvirana. Ndakazoita humwe husiku huviri ndipo pakauya recovery car. Pandakati ndakuenda akachema veduwe. Mazuvano takungofonerana ane pamuviri.
MaZirudo nekusvirana paHurungwe! Veduwe ndakasvira garo rinenge vise appeared first on Vanodazvinhu.com
Updated: November 11, 2020 — 1:08 am
Tags: MaZirudo nekusvirana paHurungwe!